Izinto Ukwenza Xa Dating a Isitshayina Umfazi, Wena kuhlangatyezwana nazo kwi-Intanethi
Dating a Isitshayina umfazi uya kuba kunzima ukusebenza ngokupheleleyo opposite bonke dating kuwe sayenza kwixesha elidlulileyo. Akunjalo ukususela ekuqalekeni babe.
dating ukusukela kuba nabo, izakuba ekugqibeleni kukhokelela umtshato. Kodwa ezinye kunoko, nisolko pretty lucky ukuba iphelile phezulu marrying elungileyo kwaye beautiful Isitshayina umfazi. Kodwa ukuba ukhe ubene ikhangela abafazi kwi Isitshayina dating site njenge Ngokwenene Isitshayina, wena, nento yokuba ibe kokufuna ezi iincam ukunceda wena kunye capturing ukuba Isitshayina umfazi ke intliziyo: Isitshayina abafazi asoloko ezinzima xa oko iza dating. Ukuba ukhe ubene ikhangela a ezinzima budlelwane, ngoko ke baya.
i olugqibeleleyo partners
Ekubeni loyal kwaye sithande ngakulo zabo partners waye wafundisa kubo ngalo i-kwangoko ubudala yi-oomama babo. Kodwa ukuba ukhe ubene kuphela ikhangela a Isitshayina umhlobo, ngoko qiniseka ukuba umxelele wakhe ukuba phambi kokuba yena thinks ngenye indlela. Musa umngcipheko france a kubekho inkqubela ke intliziyo nje ngenxa awuzange uyixelele wakhe ukuba ufuna baba kuphela anomdla ekwenzeni abahlobo. Nokuba wena kunye kuhlangatyezwana nazo kwi-intanethi okanye hayi, ukuba ukhe ubene dating a Isitshayina umfazi okokuqala, ngoko ke kungcono ukufunda indlela dating kwenzelwa kwi-China kuqala. Ke kusoloko kungcono ukuba baqonde Isitshayina abantu ke, inkcubeko, ingakumbi ukuba dating kwaye budlelwane nabanye kuba abo bakholisa ukuba abe conservative xa oko kuza ukuba isihloko. Ukusuka foreigner ke imbono, nto ukuze uqwalaselwe njengoko eqhelekileyo kulo ilizwe lakho kwindawo China ngu-hayi. Omnye umzekelo ngu wangaphambili marital ngesondo. Oko kungenzeka eqhelekileyo kuba amanye amazwe, kodwa Isitshayina umfazi ke imbono, oko kuthetha ukuba yakho kubudlelwane sele ezikhokelela ngakulo umtshato. Nangona ingezizo zonke kodwa inkoliso yabo. Enye into ukuze ulungise oko kukuthi ukuba usebenzise ezinye uphando kwi Isitshayina dating iincam. Uzaku ukufunda elikhulu yaba yi-inkqubo ekhawulezayo uphando kwi kwi-intanethi. Ekubeni a gentleman akuthethi ukuba ngenene thatha kakhulu kakhulu iinzame ezininzi kwindlela yakho isiqingatha. Oku mhlawumbi easiest tip kweli nqaku. Kwi Isitshayina dating inkcubeko, ke kubalulekile ukuba abe at yakho eyona mna. Nokuba ngaba kuhlangatyezwana nazo ngexesha Isitshayina dating site okanye kwenye indawo enye into, siphathe abafazi ngokumayela kwaye kuba polite, hayi kuphela kwabo kodwa ngakulo zabo usapho nabahlobo kakhulu. Charm yakhe, bonisa wakhe ukuba ufuna appreciate yakhe ethabatha ixesha ukufumana ukwazi ngamnye ezinye ngakumbi kwaye sibonisa iinzame ngexesha lokwenza budlelwane umsebenzi. Honesty yi vital inxalenye wonke budlelwane. Ekubeni honest ngamnye kunye nezinye kuya kusinceda kunye kuni ukukhula kwaye sibengabantu umntu omnye komnye. Akukho mcimbi mkhulu okanye mncinane kangakanani kubalulekile, ke kusoloko kungcono ukuba abe vula malunga imizwa yakho ngakubo.
Babeya nkqu enkosi yakho honest
Kuba Isitshayina umfazi ukuba ukhe ubene dating, ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba wakhe ukuze nibe nokufunda ezinye Isitshayina. Mhlawumbi hayi yonke into kwi Isitshayina magama, kodwa ubuncinane abanye ezisisiseko amazwi kwaye phrases bucala kwi”haloname”. Ke ibonisa wakhe ukuba ukhe ubene wenza iinzame okufunda i-inkcubeko apho yena ukhulele. Ingabhalwa elungileyo kuqala impression xa yena introduces kwenu kuye osapho kunye nabahlobo. Dating kwi-China ngu indlela ezahlukeneyo ezivela kwamanye amazwe. Kodwa inye into kuba ngokuqinisekileyo, baya kuthabatha budlelwane nabanye, ingakumbi umtshato kakhulu seriously. Ukuba ukhe ubene dating a Isitshayina umfazi ukuba ufuna kuhlangatyezwana nazo kwi-intanethi, kwaye kufuneka akukho unye njani umhla omnye, ngoko ke kancinci uphando ingaba ufuna abanye okulungileyo. Khumbula ukuba ibe gentleman, hayi nje kuye, kodwa wonke umntu ebalulekileyo kuye. Ke kanjalo kubalulekile ukuba bobabini ufuna honest ngamnye kunye nezinye. Okokugqibela, bonisa wakhe ukuba ufuna anayithathela made ezinye iinzame kwi-learning a Isitshayina dialect.
← BBC - Eyinkunzi - Kutheni izigidi Isitshayina abantu bamele staying omnye
Apho kukho eyona iindawo elondon ukuhlangabezana enye Isitshayina kubekho inkqubela. Ividiyo Dating →